Welcome to Aayaha Nolosha » DHAMBAAL GAAR AHAANEED (QALINKA SAALAX NUUR).
DHAMBAAL GAAR AHAANEED (QALINKA SAALAX NUUR).
February 26, 2019 - Waxaa Qorey : Saalax -
Habluhu ma sinna, isku dooqna ma aha, midba wax gaar ah ayay xiiseysaa.Xeeldheerideyda hadaan daraasadeyo umuuraha haweneed ee Hani waxa aan wada ogaal lahaa quluubta Dumarka in ay tahay mid Naxariis leh Marka uu jiro xiriir lamaane oo Facweyn taas oo qofkii gayaankeeda ah la Dabasho Mowjadaha sar sare moolkiisu aan maangabta ogeyn in uu yahay mid Guul gaara ugu danbayntiina.
Haniyay sanadkan waxa aan kuu soo jumleeyay Erayo qaali ah ku ah nafteyda iyo taada waa Aduun Noloshii Oo idil abaayoy xasuuso qadarinta iyo Qiimaha aan ku hayo.
Walaahi haniyay ifka inta aan joogo lagama yaabo maalin barkeed in aan ku hilmaamo waayo mar hore ayad qadatay furiihi xasuusta ee qalbigeyga waana ay adagtahay in aan si deg deg ah aan ku waayo.
Waxa jirta in qof wax raba inta badan uusan raaxo ku helin aniga dhibka I haya ee baahiyaha dhankaga walaahi sida ay wax iga yihiin Allaah ayaa xaqiiqda og adigana waxa aad iga heysaa faro.
Xasuusta nolosha waa mid adag markasta oo laga sheekeeyo arimaha bulshada wa ay adagtahay in aan goob joog ka ahaado maxaa yeelay waxa I horyaal muuqaaga oo sawiran Erayo qalbiga an ka go’in waligood oo aad I oranjirtay.
Waxaa sil salad dheer nafta ku ah oo ku xir xiran barshadii bilaawgi wadahalkeena taas oo Nafta Xabsi galisay marark qaar sababtay ama aan gaarav qar iska tuur nafteyda aan ku sameeyo hadba aan isdabo qabto.
Waxa aan ogahay in aan ahayn qof danbiila ah inkastoo aan horey u sheegay in waqtigaan uu yahay mid hani ay ku jirto mid waxbarasho lakin anigu aan badbadinayay waqti guban lahaa aan mool dhexfadhiyo.
-Waxaan jeclahay cumrigeyga inta ka dhiman inaan adiga kula qaato’
-Waligeey kuma qiyaanaayo’
-Waad quruxbadantahay’ macnaha ma aha kaliya inay muuqal ahaan qurxoontahay waxay koloo muujineysaa in nafsiyan ay tahay mid quruxbadan.
-Waan nasiibbadanahay maxaayeelay adiga ayaan kugu Rajo weynahay in aan ku helayo’
-Kuma iloobidoono gacaliso’
-Waan boogaadinayaa waxkasta oo aad ii sameyso’
-Aduunka oo dhan ayaad ii tahay’
-markii maqlo afarahaga waxa aan dareemaa farxad gaar ah.
-Waxaad i dhameystirtay’
-Waad ku saxantahay wixii aan kaaga qaldanahay
-Aniga ayaa ku leh hadii Alle Idmo’
-Nolasheyda Ayaad badashay’
-sheekadaada kama xiiso dhigo wad ogtahay
– Yaab ayaad leedahay’
-Maxaad isleedahay haniyay intan oo Erayo wad mudantahay runtii
-waxa aan la qiyaasi Karin anigoo og wax walba sifda ay yihiin
-hadana Naxariste EEbo lagama quusto waxa aan kaa rajeynayaa 20 wax wanaagsan adigana allaha ku fududeeyo.
W/Diyaariyey:- Suxufi Sare: Saalax Nuur Cali